Mahatody lavitra ny hery miasa mangina ananan’ ny tokantrano kristianina
"Andriamanitra ô, Hianao efa nampianatra ahy hatry ny fony aho mbola tanora; ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagaganao aho." Sal. 71:17
Ny fitondran-tena, ny toetra mampiavaka ny tsirairay sy ny fahazarana izay mandrafitra ny toetra: ny zavatra rehetra atao ao an-tokantrano dia misy akony eo amin'ny fiainana manontolo. Ny fahalemena izay leferina dia hMrim-paka eo amin'ny fisainana sy ny teny ary ny asa. - TFC 6:174. Mihoatra lavitra noho ny olona ao an-tokantrano ny asa nanirahana ny tokantrano. Ny tokantrano kristianina dia tokony ho lesona azo tsapain-tanna, izay mambo ny hatsaran'ny foto-kevitra marin'ny fiainana .Ny fanehoana toy izany dia ho hery hoenti-manao ny tsara eo amin'izao tontolo izao. Manan-kery miasa mangina be lavitra eo amin'ny fon'ny olombelona sy ny fiainana ny tokantrano marina noho ny toriteny azo atao. Raha miala avy amin'ny tokantrano toy izany n}, tanora, dia ho voazara ny lesona nianarany tao. Ho tafiditra ao amin'ny ankohonana hafa ny foto-kevitry ny fiainana ambony kokoa, ary hisy hery miasa mangina hanandratra eo amin'ny fiaraha-monina. - - IMF, U. 227-228. Ny tokantrano izay anjakan'ny fifanajana sy ny fifampitsinjovana kristianina dia manana hery miasa mangina mahataka-davitra. Ho hitan'ireo fianakaviana hafa ny vokatra aterak'izany ary hanaraka ny ohatra izay hitany izy ireo ka hiambina mba tsy ho tratry ny hery miasa manginan' i Satana. Ny anjelin'Andriamanitra dia hamangy matetika ny tokantrano izay mankatô ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tokantrano toy izany, eo ambanin'ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra, dia ho tonga toerana famelombelomana ho an'ny mpivahiny sasatra. Noho ny fiambenana amim-palmmiloana dia tsy misandratra ny izaho. Fahazarana tsara no voatefy. Hita ao ny fanekena ny zon'ny hafa. Ny finoana izay miasa amim-pitiavana sy manadio ny fanahy no misongadina sy mibaiko ny ankohonana manontolo. Eo ambanin'ny hery miasa manginan'ny tokantrano toy izany dia ekena sy ankatoavina amin'ny fahafenoany kokoa ny fifandraisam-pirahalahiana araka izay voambara ao amin'ny Tenin'Andriamanitra. -AH, t 31. Ny fiainan'i Kristy dia voaseho ho môdely ho antsika, ary rehefa manao asa fanompoana toy ireo anjelin'ny fahasoavanambahanampynyhafany olona dia mifandray akaiky amin'Andriamanitra. Toetra maha-izy ny fivavahana kristianina ny mizara fahasambarana ho an'ireo ankohonana sy olona eo amin'ny fiaraha-- ST, 17 Febroatycle41€ I Wi ndo Acceaez aux pararn€ Cerfs° fatet 43,/ 20